isivumelwano: ipremiyamu entsha ye-lg 50-intshi 4k ye-smart TV ithengiswa nge- $ 300 ngeyona nto ithengwayo, gcina imali enkulu!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Ixabiso elitsha leprimiyamu ye-LG 50-intshi ye-4K ye-Smart TV ethengiswayo nge-300 yeedola kwi-Best Buy, gcina enkulu!
Idili: Ixabiso elitsha leprimiyamu ye-LG 50-intshi ye-4K ye-Smart TV ethengiswayo nge-300 yeedola kwi-Best Buy, gcina enkulu!
I-LG 50 'yeTV yeTV eyiTV Entsha Eyona Ntengiso $ 299,99
Jonga ezona ntengiso zikhethekileyo zeTV yeAmazon.
Ngelixa i-LG & apos; s i-smartphone fortunes isenokungabi nkulu kangangexesha elide, inkampani iyayibulala ngokuqinisekileyo xa kusenziwa umabonakude. Ukuba ujonge ukufumana i-LG ekumgangatho ophezulu ngexabiso elikhulu, unokufumana eyona nto ithengwayo yokuthenga kunye neepos;
Umthengisi wee-elektroniki umthengisi uthengisa i-LG eyi-50-intshi ye-4K ye-LED yeTV eyi- $ 300. Esi sisaphulelo se- $ 200 xa kuthelekiswa ne-MSRP yesiqhelo kwaye ngokulula kwexabiso eliphantsi le-LG 50-incher esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Imodeli inereyithingi iyonke yeenkwenkwezi ezi-4.5 / 5 ukusuka kuphononongo olungaphezulu kwama-690, kunye ne-91% yabathengi abazimisele ukuyicebisa kumhlobo.
Iphaneli ye-4K kule TV ijikelezwe zii-4 slim bezels eziphezulu. Iimpawu ezibonakalayo zibandakanya i-HDR10 kunye ne-HLG (iHybrid Log Gamma), izithethi ezimbini ze-10W kunye neqonga le-webOS elinika ukufikelela kwiNetflix, iHulu, iVidiyo yeAmazon kunye nezinye iinkonzo. Ngaphaya koko, iTV iyahambelana neAmazon & apos; s isithethi esikrelekrele se Alexa.
Ukuba esi sivumelwano sinomdla kuwe, eli khonkco lingasentla liya kukukhokelela kwi-Best Buy. Ufumana iwaranti yonyaka o-1, ukuhanjiswa simahla, kunye nesilingo sasimahla seentsuku ezingama-30 seSling TV.
ipad umoya 2 128gb ngolwesihlanu omnyama
Ungayifaka njani ithegi, ukutsala iingoma okanye ubugcisa bealbham, kwaye uququzelele umculo kwifowuni yakho ye-Android ngendlela elula
I-5 enkulu ye-iPhone Live yeefoto ezinje ngee-Android
Uyivula njani itreyi yeSIM khadi xa isixhobo se-ejector singesiso & ngeenxa zonke (indlela yeMacGyver)